प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैं, के छन् एजेण्डा ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > सरकार गतिबिधी > प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैं, के छन् एजेण्डा ?
प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैं, के छन् एजेण्डा ?
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:५२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संघीयय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे डाकिएको बैठकमा ती दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विविध विषयमा छलफल हुने बताए ।
तर खरीबोटलाई प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा राजतन्त्रको बारेमा चर्किएको प्रदर्शन छलफलको प्रमुख एजेण्डा रहेको छ ।
अहिले सडकमा नेपाली झण्डा लिएर हरेक दिन जसो राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएपनि ठुलो संख्यामा आम जनताको उपस्थितिले गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दललाई झस्काएको अनुमान गरिएको छ ।
भीमेश्वर नगरपालीका वडा नंं –२ डोकथली चिसापानीमा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण २३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:५२
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै २३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:५२
हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ? २३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:५२
थनु लुँय भाउ थिरकु २३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:५२
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? २३ मंसिर २०७७, मंगलवार ०९:५२